CAYAYAANKA UGU WEYN EE DILL: SIDA LOO MAAREEYO CAYAYAANKA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Sida loo buufiyo dufanka ka soo cayayaanka, sida loola macaamilo cayayaanka, aphids iyo aboorada dhirta
In dabiiciga ah, ma jiraan wax cayayaanka ah oo digaag ku keli ah, laakiin waxaa jira liis cajiib ah ee cayayaanka kuwaas oo doorbida in ay degaan dhirta qoyskan: dhir, karootada, celery, iyo kuwa kale.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale jira cayayaanka noocan ah, taas oo, xulashooyinka kale, door bidaan dhirta gaarka ah, sidaas darteed waxaa loo yaqaannaa cayayaanka ee dill. Maxay yihiin xayawaankaas iyo sida loola dagaalamo, waxaan sii sheegi doonnaa dheeraad ah.
Dhibaatada ka jirta xakamaynta kiimikada
Labada qaybood ee dhulka hoostiisa iyo dhulka waa la weerari karaa. Rootiyada hanjabay by a xayawaan, siisay, dirxiga ah duqsiyo May, wireworms iyo cayayaanka kale.
Cagaarka saameyn ku yeelato qashinka, xayawaanka, sigaarka, shilinta, goyska iyo dadka kale ee dhulka deggan. Si kastaba ha ahaatee, wax kasta oo cayayaanka ah ee dill, dagaalka ka dhanka ah waxaa loo qabtaa kaliya by hababka caanka ah.
Marka koritaanka dhirta loo isticmaalo waa mamnuuc in la isticmaalo sunta cayayaanka iyo kiimikooyinka kale, sababtoo ah waxaa loo adeegsadaa cuntada, inta badan aan lahayn daaweyn kuleyl ah.
Ma taqaanaa? Xaaladaha intooda badan, dill waxaa loo isticmaalaa sidii xawaash. Cagaarka waxaa lagu daraa liiska, khudradda, kalluunka, suxuunta hilibka, iyo sidoo kale xabagta, suugada, maraqa, saladhka. Waxaa intaa dheer, waxaa lagu daray isla markiiba ka dib diyaarinta saxanka, tan iyo markii daaweynta kulaylka ka dib ay lumiso dhadhan. Dalladaha ubaxyada waxaa loo isticmaalaa ilaalinta iyo sifeynta khalka. Dhirta la qalajiyey waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya sida xayawaanka madaxbannaan, laakiin sidoo kale lagu daray isku dar ah ee geedo.
Sidaa daraadeed, adoo tixgelinaya xaqiiqooyinkaas, suntan cayayaanka waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya haddii dill laga koro abuur.
Sida loo xaliyo aphids on dill
Badanaa waxay saameyneysaa dill aphid dabacasekuwaas oo inta badan jecel inay ku degaan on khudradda cagaaran iyo cagaar caafimaad leh. Tani waa cayayaanka yaryar ee cagaaran ee yar yar ee cagaaran, oo laga helaa cagaarka geedaha, laga heli karo cagaarka dufanka, laga bilaabo halka ay adag tahay in la helo ka hor inta aan loo isticmaalin warshadda cuntada. Cayayaanka laftoodu ma aha mid sumow ah, laakiin cid kastaa way ku faraxsan tahay fursada ay ku cunaan dill iyo aphids.
Waa muhiim! Marka laga soo tago cayayaanka, khatarta ah dill waxaa ka muuqda cuduro kala duwan, gaar ahaan lagu koriyo. Sidaa darteed, marka koraan dill, si adag u hoggaansami tiknoolijiyada nidaamka this. Qaado daryeel gaar ah koraan ku koriyo: biyaha dhexdhexaad ah, inta badan hawada, hayn qoyaan 50%, iyo heerkulka - 15 ... 20 ° C].
Tallaabooyinka xakamaynta oo leh cayayaanka dill ku sharxay ka kooban yahay ku buufin dalagyada leh tinctures kala duwan: tusaale ahaan, laga bilaabo yaanyo ama caleemo baradho, tubaako. Aphid waxay leedahay dabool khafiif ah kaas oo xitaa lacagaha ugu liita.
Dusha baradhada Solanin waxaa ku jira sunta, taas oo saameyn xun ku leh tl, sidaa darteed, si loo diyaariyo faleebo, waa lagama maarmaan in la qaato nus ah laba kiilo oo qayb ah khudradda baradho ama yaanyada, yara soo saar oo ku shub baaldi biyo ah.
Kadibna isku darka waa la kariyaa ilaa nus saac ama ugu yaraan saddex saacadood. Ka dib markaa, waxay ku sii jirtaa 30 - 40 g saabuunta dufan ama 30 ml oo ah dareeraha, kaas oo hayn doona faleebo on geedka iyo si fiican u qaybiso. Daadinta waxaa la sameeyaa subaxda iyo fiidka.
Warshadda tubaakada Nikotiin wuxuu burburiyaa cayayaanka. Xaaladdan oo kale, si loo sameeyo faleebo, 100 g of caleemaha geedka waxaa la jajabiyey oo ku shubtay litir oo biyo ah. Waa lagama maarmaan inaad ku adkaysato maalin, ka dibna adkee oo ku dar saabuun sidoo kale. Sida saldhig u ah, waxaad isticmaali kartaa qaybta dhulka ee celindine, basbaaska kulul, qandhada. Ka dib markii la buufiyo dill, ka hor isticmaalka tooska ah, waa in si fiican loo dhaqay ka yar il biyo ah oo xoog leh.
Tallaabooyinka lagula dagaallamo aboorka dill
Cayayaanka ayaa sidoo kale loo yaqaan sida aboorka karootada. Tani waa yar tahay, ilaa 19mm balanbaalis leh baalal gaduud ah oo casaan ah. Wadar ahaan, waxaa jira in ka badan 100 nooc oo noocyada ah, sidaas darteed waxaa laga yaabaa in ay ka duwan tahay mid ka mid ah horey loo soo qabtay.
Raadhisyada cayayaanka, kuwaas oo metelaya khatarta dillada, waxay leeyihiin midab guduudan, taas oo ah wax yar oo cagaaran u dhexeeya qaybaha. Iyada oo ku xiran xaaladaha cimilada, hal haween ah oo hal sanno ah waxay jajabin kartaa hal illaa seddex jiil oo ah dulin yar.
Khatarta cayayaanka waa in rinjiyayaashu ay ku degaan dalladaha dhirta, cunista cunnooyinka iyo abuurka dhalinyarada, dhoofinta iyo xoojinta dalladaha. Dhab ahaantii, magaca kale ee cayayaanka - duufaan
Caadi ahaan, ma tagto dagaal culus oo ka dhan ah cayayaanka, maadaama ay warshadda saameeya si dhakhso ah looga saaray oo loo gubay. Waa muhiim in la daadiyo dillada caafimaad qabta waqtigeeda, iyo sidii tallaabo looga hortagi lahaa, burburin dalagyada duurka duurka si aan cayayaanka uugu duulin goobtaaga.
Caleen cana ah iyo dill
Listobloshka carrot - cayayaanka oo leh jir yar oo cagaaran, illaa 2 mm dherer iyo baalal wareeg ah. Waxay leedahay indho casaan, antenna fiinjiyo dhaadheer, boodboodo boodaya. Bixinta ukumo cadaan ah, oo koraan huruud marka ay qaangaadhayaan. Muddo sannad ah, qaylo-dhaan ayaa soo saari doona jiil. Isku dhajin onotooto duurjoogta ah ama irbadaha geedaha. Dhaqdhaqaaqa dumarka ka dib jiilaalku wuxuu dhacaa bisha Maajo.
Cayayaanka Tani waxay halis u yihiin dhammaan marxaladaha horumarinta. Nymphs, dirxiga iyo dadka waaweyn waxay si firfircoon u nuugaan juuska laga bilaabo asliga ah iyo caleemaha geedka. Inta badan degaan on caleemaha yar yar, sidaas dill joojiyo sii kordhaya, cawska cagaaran iyo deform, ka dibna qalalan.
Waa muhiim! Waxaa fiican inaad si dhakhso ah u isticmaasho tallaabooyinka ka hortagga cayayaankan dillada ah, markaa kadib maahan in aad muddo dheer ka fekereyso sida loola dagaallamo hab aad u daran. Waa lagama maarmaan in laga saaro dhammaan geedo dabacasaha duurjoogta ah iyo geedo waaweyn oo u dhow meesha uu dill la korto, iyo haddii aysan taasi suurogal ahayn, dabooli dhirta leh spunbond ama lutrasil caleemaha kowaad. Marka dilladu kororto, waa lagama maarmaan in la daboolo ciidda, cawska loola dagaallamo, iyo isticmaalka dhaqamada kale ee beeraha.
Tallaabooyinka xakamaynta waxay ka kooban tahay ku buufinta cirifyada liinta leh fiyuusyada, boodhka tubaakada ama qamriga tubaakada. Si aad u diyaargarowdid, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso kiilo sigaar ah ama qashin, ku shub baaldi biyo kulul (biyo aan karkarin) kuna adkeyso 24 saacadood. In faleebo sifeeyay qallajiyey saabuun iyo horeyba isku dar ah waxaa lagu buufin leh dill.
Sida loola tacaalo cayayaanka Talyaaniga
Cayayaanka waxyeellada leh waxaa mararka qaarkood la yiraahdaa gaashaan. Waxaa la hawlgeliyaa dabayaaqadii Abriil, marka dadka waaweyni ka soo baxaan haraaga dhirta sannadkii hore oo ay degaan dhirta ugu horeysa. Marka celceliska korayo, waxay u wareejiyaan iyaga, halkaas oo ay si tartiib ah u dhigaan ukunta bilawga ilaa bartamaha xagaaga.
Tani waxay ka dhigan tahay in dirxiga cayayaanka u muuqanayaan ku dhawaad ​​dhammaan xilliga diiran ee sanadka. Sida dadka waaweyn, waxay ku quudiyaan dheecaanka ubaxa iyo miraha yar, taas oo si weyn u waxyeeleynaysa dalagga.
Dagaalka ka dhanka ah grafizom dhuuban (magaca cayayaan kale) uma baahna hawlo waaweyn. Inta lagu jiro muddada laysku daro, cayayaanka ayaa si weyn ugu dhajinaya sare ee warshadda, si ay si sahlan ugu riixaan baaldi biyo ah ama gabi ahaanba jilbaha kor u qaadaan oo ku daadi biyo.
Si looga hortago dhacdada cayayaanka ee goobta, waa lagama maarmaan in la burburiyo dhirta duurjoogta ah, oo ka tirsan qoyska Umbrella, sidoo kale waxay raacdaa qawaaniinta wareegga dalagga iyo meelaynta celery.
Nidaamyada wax ka qabashada duufaanta
Sida horey loogu sheegay, dill sida cayayaanka ugu weyn ee dabacasaha, kuwaas oo duudduubka digaaga - cayayaanka yar yar ee cagaarka leh baalasha hufan. La dagaallama Waxaad awoodi kartaa inaad kala jajabiso isku dar ah gaar ahaan inta u dhaxeysa safafka dill. Diyaarinteeda, waxay ku qaadataa si isku mid ah jimicsiga lakulmay, ash qoryaha iyo boodhka tubaakada.
Ugu yaraan 5 g oo ah isku dar ah waa in loo isticmaalaa halkii mitir labajibbaaran. Daaweynta waxaa la sameeyaa laba ilaa saddex jeer 8 ilaa 10 maalmood. Wuxuu si fiican u muujiyay dagaalka ka dhanka ah cayayaanka iyo faleebo ah dhaladooda yaanyada loo diyaariyey sida ku xusan ee cunto karinta kor ku xusan.
Sida loo yaqaan 'prophylaxis' Si loo ciribtiro cayayaanka, ku buufin dhirta leh faleebo toon, basal, guntin, gooryaan, yar yar ama chamomile. Si arrintan loo sameeyo, qaado 200 - 300 g oo ah walxaha cayriinka ah, si fiican u jar iyo ku shub 2 litir oo biyo kulul (biyo aan karkarin).
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu adkeeyo daaweynta ugu yaraan hal maalin, ka dib markaa la sifeeyo, kahor intaan la isticmaalin biyaha ayaa lagu darayaa (aan ka badnayn baaldi) iyo 30-40 g oo saabuun. Urka cad ee dhirta loo isticmaalo ayaa ku sii jiri doona gudaha 4-5 maalmood, taasoo ka cabsanaysa duulimaadka.
Ma taqaanaa? Dhibaato badan oo aan waxyeelleynin cayayaanka ayaan la dhicin dalagyada. Sidaa darteed, waqtigeeda ku qaad sariiraha khafiifiya oo ha ilaawin si ay u hubiyaan in aanay u muuqan haramaha. Waraabinta waa in ay ahaato mid dhexdhexaad ah, iyada oo aan rushayn. Diidmada duudduub ma jecesho carrada peat, sidaas darteed, haddii ay jirto suurtagal ah in mulching leh cufan peat, waxaa fiican in ay qabtaan.
Sida loo ilaaliyo xayawaanka ka soo cayayaanka: tallaabooyinka ka hortagga
Tallaabooyinka ugu muhiimsan ee ka hortagga ee kiiskan - waafaqsan xeerarka dill sii kordhaya. Xasuuso in dhirta dalladda ee wareegga hal sano ah lagu beeray masaafada dheer ee dhirta isku qoys, laakiin laba sano oo wareeg ah. Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad si taxadar leh uga saarto dhammaan cawska ka mid ah dalladda.
U hubso inaad ka saarto goobta dhammaan harooyinka dhirta, caleemaha dhacday, iyo qodo ciidda jiilaalka. Inta lagu jiro beerashada si adag u ilaali agrotechnology isla markaana u falceliyaan wakhtiga si aad u aragto cayayaanka aan loo baahnayn.
Dill ma laha cayayaanka khaas ahaan khatarta leh, laakiin mararka qaarkood cayayaanka ayaa degaya, taas oo si gaar ah u doorbiday dhirta dalladda qoyska. Si loola dagaalamo iyaga waa sahlan. Waxaa jira qiyaaso badan oo nafaqo ah iyo fusho oo si wax ku ool ah uga cabsi qabta.
Waa in la xusuustaa in kiimikooyinka iyo sunta cayayaanka aan lagu daboolin dill, maadaama loo isticmaalo cuntada aan la isticmaalin. Tallaabooyinka ugu wanaagsan ee lagu xakameynayo cayayaanku waa ka hortagga iyo, ka sarreeya, beerashada dhirta saxda ah.